ဝမ်းချုပ်ဆေးဝါး Linaclotide နှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိရန်လိုအပ်သည့်အရာများ
1 ။ Linaclotide (Linzess) ဆိုတာဘာလဲ။
2 ။ Linaclotide ကိုဘာအတွက်အသုံးပြုသလဲ။
3 ။ Linaclotide ၏လုပ်ဆောင်မှုယန္တရားကဘာလဲ။
4 ။ Linaclotide ကိုမည်သို့အသုံးပြုသင့်သနည်း။
5 ။ Linaclotide (Linzess) အတွက်သောက်သုံးသောပမာဏကဘာလဲ။
6 ။ Linaclotide သည်မည်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေနိုင်သနည်း။
7 ။ မည်သည့်ဆေးဝါးများသို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်မှုများ Linaclotide နှင့်ဆက်သွယ်မည်နည်း။
၈။ Linaclotide နှင့် lubiprostone အကြားခြားနားချက်များကဘာလဲ။
9 ။ Linaclotide နှင့် ပတ်သက်၍ အခြားမည်သည့်အချက်အလက်ကိုကျွန်ုပ်သိသင့်သနည်း။
1. Linaclotide (Linzess) ဆိုတာဘာလဲ။
Linaclotide (Linzess) FDA ၏ခွင့်ပြုထားသောခံတွင်းဆေးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသောလူနာများအနေဖြင့်နာတာရှည်ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ Linaclotide 851199-59-2 သည် guanylate cyclase-C agonists ဟုရည်ညွှန်းသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးအတန်းအစားအသစ်၏ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိသည်။
Linaclotide အမှတ်တံဆိပ်သည် Linzess ဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်တွင် Linaclotide ယေဘူယျဗားရှင်းမရှိကြောင်းသတိရရန်အရေးကြီးသည်။ ထို့ကြောင့် အကယ်၍ သင် Linaclotide ကိုရောင်းရန်သို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုရန်ရှာဖွေနေသည်ဆိုပါကတရားမဝင်ရောင်းဝယ်နေသောတရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်သူများကိုရှာဖွေပါ။ Linaclotide ယေဘုယျ မူးယစ်ဆေးဝါး။
Linzess သည် guanylate cyclase-C agonist နှင့် 14-amino acid peptide ဖြစ်သည်။ ဓာတုဗေဒအမည်မှာ L-cysteinyl-L-cysteinyl-L-glutamyl-L-tyrosyl-L-cysteinyl-L-cysteinyl-L-asparaginyl-L-prolyl-L-alanyl-L-cysteinyl-L-threonyl-glycyl- L-cysteinyl-L-tyrosine, သိထား (1-6), (2-10), (5-13) -tris (disulfide) ။
၎င်း၏မော်လီကျူးပုံသေနည်းမှာ C59H79N15O21S6၊ မော်လီကျူးအလေးချိန်မှာ 1526 ဖြစ်သည်။
Linaclotide အမှုန့်သည်အဖြူမှအဖြူရောင်ရှိပြီးရေတွင်အနည်းငယ်ပျော်ဝင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် aqueous sodium chloride (0.9%) တွင်အနည်းငယ်ပျော်ဝင်နိုင်သည်။
နိဂုံး Linzess Linaclotide-coated ပုတီးပါဝင်သော Hard gelatin တောင့်ပုံစံဖြစ်သည်။ Linzess တွင်ပါဝင်သောပါဝင်ပစ္စည်းများတွင်ကယ်လစီယမ်ကလိုရိုက်ဒီဂျိုက်၊ L-leucine, titanium dioxide၊ microcrystalline cellulose, gelatin နှင့် hypromellose တို့ပါဝင်သည်။
2. Linaclotide ကိုဘာအတွက်အသုံးပြုသလဲ။
၎င်းသည် Linaclotide အသုံးပြုမှုကိုလူတို့ကအူသိမ်အူမရောဂါကဲ့သို့သောအူသိမ်အူမရောဂါပြaနာများအတွက်ကုသမှုအဖြစ်အသုံးပြုသည်။
များအတွက် Linaclotide စိတ်တိုအူသိမ်အူမ syndrome ရောဂါ ရောဂါလက္ခဏာ
Irritable အူသိမ်အူမ syndrome ရောဂါ (IBS) ပုံမှန်အားဖြင့်အူသိမ်ကိုပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်အောင်တားဆီးပေးသောတာရှည်ရောဂါဖြစ်သည်။ ဤသည် Linaclotide အရိပ်အယောင်ကိုလည်း spastic အူမကြီးနှင့်တစ်ခါတစ်ရံအလုပ်လုပ်တဲ့အူသိမ်အူမရောဂါအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။ ရောဂါ၏အဓိကလက္ခဏာများမှာဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ ၀ မ်းလျှောခြင်းနှင့်ဝမ်းဗိုက်နာကျင်ခြင်းအားဖြင့်ချုပ်ခြင်းသို့မဟုတ် ၀ မ်းလျှောခြင်းနှင့်ပြောင်းသည်။
Linaclotide ၏ထိရောက်မှုကိုသိရှိရန်လက်တွေ့လေ့လာမှုတစ်ခုအနေဖြင့်အူသိမ်အူမရောဂါလက္ခဏာများသက်သာစေရန်အတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူလူနာများကိုကျပန်း၊ ပထမဆုံးစမ်းသပ်မှုမှာနေ့စဉ် linzess ကုသမှုသင်တန်း ၂၉၀ mcg မှာကုသမှုပေးနေစဉ် ၈၀၄ ယောက်ကိုရလဒ်များအရအိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီကုသမှုပေးရ
အုပ်စုနှစ်ခုလုံးတွင်အသုံးပြုသောလူနာအားလုံးသည် IBS Rome II စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီပြီး3၏ဝမ်းဗိုက်နာကျင်မှုကိုအနည်းဆုံးသုညမှ ၁၀ အထိအနိမ့်ဆုံးရမှတ်နှင့်အနည်းဆုံးအပြည့်အဝအူသိမ်အူမလှုပ်ရှားမှု ၃ ခုတွင်ကုသမှုသင်တန်းရရှိရန်မျှော်လင့်ရသည်။ ကာလ။
ကုသမှုကာလအဆုံးတွင် linzess ကုသမှုသင်တန်းတက်နေသောလူနာများသည်သူတို့၏ရလဒ်များအရအိပ်ယာပေါ်ရှိပိုးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် BIS လက္ခဏာများပိုမိုတိုးတက်လာခဲ့သည်။
၎င်းသည် BIS အတွက်ထိရောက်သောကုသမှုအဖြစ် Linaclotide ၏အရိပ်အယောင်အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။
များအတွက် Linaclotide နာတာရှည် Idiopathic ဝမ်းချုပ်ခြင်း (CIC) လက္ခဏာများ
များအတွက် Linzess ၏ထိရောက်မှုကိုအကဲဖြတ်ရန်လေ့လာမှုတစ်ခုမှာ CIC စီမံခန့်ခွဲမှုလက္ခဏာများ, နာတာရှည် idiopathic ချုပ်နှင့်အတူအရွယ်ရောက်ပြီးသူလူနာအထက်ဖော်ပြပါ BIS လေ့လာမှုနှင့်အတူတူကျပန်း, multicenter လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေထဲမှာထားရှိခဲ့ကြသည်။
လူနာတစ် ဦး စီသည်ပြုပြင်ထားသောရောမ ၂ ၏အလုပ်လုပ်သောချုပ်နှောင်ထားသည့်စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီပြီး 72 - ရက်သတ္တပတ်ကုသမှုကာလတစ်လျှောက်လုံးနေ့စဉ် 145mg, 290 mcg Linzess, 12 mcg Linzess သို့မဟုတ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာကုသမှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
ကုသမှုကာလပြီးဆုံးချိန်တွင်သုတေသီများသည် Linzess ကုသမှုခံယူသောလူနာများအနေဖြင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာပေါ်ရှိသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုသိသာသော CIC လက္ခဏာတိုးတက်မှုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်၎င်းတို့သည်ထိုင်ခုံအကြိမ်ရေ၊ ထိုင်ခုံ၏ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုနှင့်အူသိမ်အူမလှုပ်ရှားမှုပမာဏတို့၏မြင့်မားသောအဆင့်ကိုတိုးတက်စေသည်။
Linzess ဆေးသုံးမျိုးလုံးတွင် CIC လက္ခဏာများပြခြင်းအပြင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနည်းငယ်သာရှိသည်။ ၎င်းသည် Linaclotide သည် CIC ကိုကုသရန်စွမ်းရည်ရှိကြောင်းသက်သေပြသည်။
3. Linaclotide ၏လုပ်ဆောင်မှုယန္တရားကဘာလဲ။
အထက်ဖော်ပြပါကျန်းမာရေးပြissuesနာများကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသောဆေးဝါးများနှင့်မတူဘဲ Linaclotide သည်ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ ၎င်းသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့မဝင်ရောက်နိုင်ပါ။ Linaclotide ယန္တရား အရည်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်သင်၏အူအတွင်း၌သာသီးသန့်ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ အူသိမ်အူမလှုပ်ရှားမှုများကိုတိုးတက်စေပြီးအူသိမ်အူမပြproblemနာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောနာကျင်မှုကိုသက်သာစေသည်။
Linaclotide (Linzess) သည်အူသိမ် guanosine monophosphate ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်အရည်ကိုပိုမိုထုတ်လွှတ်စေသည်။
Linaclotide သည်သင်၏အူအတွင်းရှိအရည်များကိုတိုးပွားစေရန်၎င်း၏စွမ်းအားကိုအသုံးပြုသောအခါအစားအစာသည်အူအတွင်းမှ ဖြတ်၍ ပိုမိုမြန်ဆန်သည်။ ၎င်းသည်အူသိမ်အူလှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောလက္ခဏာများကိုဖောင်းပွခြင်း၊
4. Linaclotide ကိုမည်သို့အသုံးပြုသင့်သနည်း။
သင်လုပ်သည့်အခါ Linaclotide ကိုဝယ်သေချာတာကဆရာ ၀ န်ရဲ့ဆေးညွှန်းနဲ့ဆိုလျှင်ဆေးဝါးမသောက်မီသင်ဆေးဝါးမှပေးသောဆေးဝါးလမ်းညွှန်ကိုဖတ်ရန်သေချာရန်အရေးကြီးသည်။ သင့်အတွက်မှန်ကန်သော Linaclotide ဆေးထိုးခြင်း၊ မှန်ကန်သောသောက်သုံးသောကြားကာလနှင့်အကြံပြုထားသောကုသမှုကာလကိုလမ်းညွှန်ကပြောပြလိမ့်မည်။
အမှု၌သင်တို့အပေါ်မှာမဆိုရှင်းလင်းချက်လိုအပ်ပါတယ် Linaclotide ဆေး, Linaclotide ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသို့မဟုတ် Linaclotide အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုများရှောင်ရှားရန်, သင်၏ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
ပါးစပ်ဆေးဖြစ်သည့်အနေဖြင့် Linaclotide ကိုပါးစပ်ဖြင့်သောက်သင့်သည်။ အစာအိမ်ဗလာနေစဉ်၊ တစ်နေ့တာတွင်သင်၏ပထမ ဦး ဆုံးအစာစားခြင်းမပြုမီ၊ 30 မိနစ်ကိုသင်သောက်သင့်သည်။ Linaclotide ၏နောက်ဆုံးဆေးသည်ဆေးတောင့်၌ရှိပြီးတစ်ကိုယ်လုံးမျိုချသင့်သည်။ သင် Linaclotide ဆေးတောင့်ကိုမချိုးသင့်ပါ။
သို့သော်သင်ဆေးတောင့်ကိုမျိုချရန်ကြိုးစားသော်လည်းအချည်းနှီးဖြစ်လျှင်၎င်းတို့ကိုဖွင့ ်၍ မာတိကာကိုပန်းသီးဆပ်ဇွန်းဖြင့်ရောစပ်နိုင်သည်။ ထို့နောက်ရောစပ်ခြင်းကိုချက်ချင်းမျိုပါ။ ထိုအချိန်၌သင်ယူမည့်ပမာဏကိုသာရောမွှေပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်အရောအနှောသိုလှောင်ခြင်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါး၏ထိရောက်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။
သင်၌ပန်းသီးဆော့စ်မရှိလျှင်ရေကိုအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ တစ်အောင်စ (သို့မဟုတ်) 30mm ရေတိုင်းတာပါ၊ သတ်မှတ်ထားသော Linaclotide ဆေးတောင့်ကိုဖွင့်ပြီးပါ ၀ င်သောအရာများကိုရေထဲသွန်ပါ။ ရေ - Linaclotide ပါဝင်မှုကိုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 20 စက္ကန့်ခန့်လောက်ကြာအောင်သောက်ပါ။ ပန်းသီးဆပ်ပြာကဲ့သို့ပင်အကြောင်းအရာကိုဝါး။ မစားပါနှင့်။
အကယ်၍ ဤဆေးကို nasogastric သို့မဟုတ် gastric tubes မှတစ်ဆင့်သောက်သုံးရန်ရည်ရွယ်ထားပါကသင်၏ဆေးဝါးသို့မဟုတ်ဆရာဝန်ထံမှညွှန်ကြားချက်ရယူပါ။ သို့သော်ဒီမှာပြွန်အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်ယေဘူယျလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်သည်။
30 ml သန့်ရှင်းပြီးအခန်းအပူချိန်ရှိသောရေကိုတိုင်းတာ။ သန့်ရှင်းသောကွန်တိန်နာထဲသို့ထည့်ပါ။
Linaclotide ဆေးတောင့်ကိုဖွင့်ပြီးပါ ၀ င်သမျှအကြောင်းအရာ (ပုတီးလုံး) ကိုရေထဲသွန်
ရေနှင့် Linaclotide ပုတီး 20 စက္ကန့်ထက်မပိုသောအဘို့အညွတ်ညင်သာစွာ swirling အားဖြင့်ပုတီး။
Linaclotide ပုတီး - အရောအနှောကိုပြွန်တစ်ခုနှင့်အရွယ်အစားတူသည့်အစွန်အဖျားရှိလက်ျာပြွတ်တစ်ခုထဲသို့ဆွဲပါ။ ထို့နောက်လူနာအသုံးပြုသော nasogastric သို့မဟုတ်အစာအိမ်ပြွန်ထဲသို့အရောအနှောကိုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 10 mL / 10 စက္ကန့်၏ဆေးထိုးအပ်ဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ဖိအားပေးသည်။.
အကယ်၍ ရှိလျှင် Linaclotide ပုတီးတစ်လုံးတွင်ကျန်ရှိနေပါက 30ml သန့်ရှင်းသောရေထဲသို့ထည့်ပြီးရောစပ်ပါ။
သင် Linaclotide ပုတီးနှင့်ရေအရောအနှောကိုစီမံပြီးတာနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပြွန်ကို flash လုပ်ဖို့အနည်းဆုံး 10 ml ရေကိုသုံးပါ။
5. Linaclotide (Linzess) အတွက်သောက်သုံးသောပမာဏကဘာလဲ။
သင့်လျော်သော Linaclotide ဆေးသည်သူကုသရန်ရည်ရွယ်ထားသည့်အခြေအနေနှင့်ဆေးဝါးအပေါ်တုံ့ပြန်မှုအပေါ် မူတည်၍ တစ် ဦး မှတစ် ဦး ကွဲပြားနိုင်သည်။ တနည်းကား, 18 နှစ်များ၏အသက်မပြည့်သေးသောလူများကဤဆေးကိုမသုံးသင့်ကြောင်းသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။
ကလေးငယ်များသည်ပြင်းထန်သောရောဂါများကိုကြုံတွေ့ရနိုင်သည် Linaclotide ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ သူတို့မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသင့်ပါတယ်။
Iripable Bowel Syndrome ခံစားနေရသောအရွယ်ရောက်သူတစ် ဦး အတွက်ဝမ်းချုပ်ခြင်းနှင့်အတူလိုက်ပါလာသည့်သူသည်သူမအနေဖြင့် 290 mcg ၏နေ့စဉ်ဆေးသောက်သင့်သည်။ အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဆေးကိုဗိုက်အောင့်စားသင့်သည်။ ထိုအရာကိုသေချာစေရန်တစ်ရက်အတွင်းပထမဆုံးအစာမစားမီသောက်ပါ။
ယူအက်စ်အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၏အဆိုအရနာတာရှည် idiopathic stip (CIC) ရှိသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူအတွက် Linaclotide ဆေးသည် 72 mcg ဖြစ်သည်။
သို့သော် 145 mcg ဆေးထိုးခြင်းကိုသူ / သူမ၏တင်ပြမှုနှင့်ခံနိုင်ရည်ပေါ် မူတည်၍ CIC ရှိလူကြီးတစ် ဦး အတွက်လည်းအကြံပြုနိုင်သည်။ သင်ငွေရှင်းနိုင်ပါတယ် linzess 72 mcg ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများ ဆေးသည်မည်သို့အလုပ်လုပ်ပုံနှင့်၎င်းမှအကျိုးခံစားခဲ့ရသောသုံးစွဲသူများ၏အကြံဥာဏ်ကိုရယူရန်။
အမျိုးမျိုးသော linzess 72 mcg ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများအရ၊ ဆေးဝါးနှင့်ပတ်သက်သောအခြားတုံ့ပြန်ချက်များအရအထက်ဖော်ပြပါကျန်းမာရေးပြwithနာများနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုခံစားနေရသောလူနာသည်လိုအပ်သောရလဒ်များကိုရရှိရန်၎င်းကိုမှန်မှန်အသုံးပြုသင့်သည်။ ထို့အပြင်သတ်မှတ်ထားသည့်ကုသမှုကာလတစ်လျှောက်လုံးယင်းကိုနေ့စဉ်တစ်ချိန်တည်းတွင်သောက်သုံးသင့်သည်။
Linzess သည်မူးယစ်ဆေးဝါးအမျိုးမျိုးနှင့် Linaclotide အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ကြောင်းသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သောက်သုံးရန်မစတင်မှီသင်၌လက်ရှိသုံးစွဲနေသည့်ဆေးဝါးများအကြောင်းသင်၏ဆရာဝန်အားပြောပြရန်လိုအပ်သည် (Linaclotide) ။
ထို့အပြင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများသည် Linaclotide ကိုသောက်ရန်စဉ်းစားသောအခါအထူးသဖြင့်သန္ဓေသားအားအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့်သတိထားသင့်သည်။ သူတို့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုအတည်ပြုရန်ဆရာဝန်၏အာရုံစိုက်မှုနှင့်မမွေးသေးသောကလေးငယ်များအားဆေးသောက်သင့်သည်ဆိုပါစို့။ အလားတူကိစ္စရပ်သည်နို့တိုက်မိခင်များနှင့်သင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲနေစဉ်ကိုယ်ဝန်ရရန်ရည်ရွယ်ထားသူများနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။
သို့သော်၎င်းတို့တွင် CIC သို့မဟုတ် Irritable Bowel Syndrome ရှိလျှင်ပင်6နှစ်အောက်ကလေးငယ်များသည်မသောက်သင့်ပါ။ Linzess အမှုန့် (851199-59-2) ။ လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်များအရမူးယစ်ဆေးသည်လူငယ်ကြွက်များတွင်အသက်အရွယ်အလိုက်သေဆုံးမှုများဖြစ်ပေါ်စေကြောင်း၊6နှစ်အောက်လူသားများနှင့်ညီမျှကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့်အသက်အရွယ်မရသေးသောလူနာများအတွက် ၀ မ်းလျှောရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှင့် ၄ င်း၏ဆိုးရွားသည့်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်နိုင်သောကြောင့်၎င်းဆေးသည်ဆန့်ကျင်မှုဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်6နှစ်ပေါင်း 17 နှစ်အထိလူနာများအကြား linzess ၏လုံခြုံမှုနှင့်ထိရောက်မှုကိုဖော်ပြသည့်လက်တွေ့အချက်အလက်များရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ICI သို့မဟုတ် BIS သက်သာစေရန်လိုအပ်သော 18 နှစ်အောက်ကလေးတစ် ဦး သို့မဟုတ်ဆယ်ကျော်သက်ဖြစ်လျှင်ဆရာဝန်၏အကြံဥာဏ်ကို ဦး စွာရှာသင့်သည်။
မူးယစ်ဆေးဝါး၏ရလဒ်အနေဖြင့်လက္ခဏာများသက်သာစေရန်သင်မတိုင်မီနှစ်ပတ်အလိုတွင်သင်ကြာနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်စိတ်ရှည်ရှည်ထားပါ။ ညွှန်ကြားသည်အတိုင်းဆက်လက်သုံးစွဲပါ။
သို့သော် linzess ကိုသုံးပြီးနောက်မှပင်သင်၏ရောဂါလက္ခဏာမတိုးတက်လျှင်သို့မဟုတ်ပိုမိုဆိုးရွားလာပါကသတ်မှတ်ထားသောပမာဏထက်ကျော်လွန်သောဆေးကိုမသောက်ပါနှင့်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုသင်မလုပ်သင့်ပါ။ ယင်းအစားမူးယစ်ဆေး၏ထိရောက်မှုနှင့်နောက်လုပ်ဆောင်မှု၏နောက်ကွယ်အကြောင်းရင်းကိုသိရှိရန်သင့်ဆရာဝန်အားအသိပေးပါ။
သင်နှင့်မတည့်ပါကသို့မဟုတ်အူလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ခြင်းရှိပါက Linaclotide ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။
အကယ်၍ သင် Linaclotide ဆေးကိုလက်လွတ်သွားပြီဆိုလျှင်လွဲချော်သွားသောဆေးပမာဏကိုပြန်မဆပ်ပါနှင့်။ ၎င်းအကြောင်းကိုမေ့ပြီးနောက်သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်တွင်နောက်ဆေးများကိုဆက်လက်သောက်သုံးပါ။
သင်သို့မဟုတ်သင်ချစ်ရသူတစ် ဦး က Linaclotide ပိုလျှံသည့်ဆေးသောက်လျှင် (အလွန်အကျွံသောက်သုံးခြင်း) ဖြစ်စဉ်ကိုဆရာဝန်၏အာရုံသို့ချက်ချင်းအသိပေးသင့်သည်။ တနည်းအားဖြင့်သင်သည်အဆိပ်အကူအညီဝန်ဆောင်မှုများကို 1-800-222-1222 ကိုခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
6. Linaclotide သည်မည်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေနိုင်သနည်း။
အမျိုးမျိုးသောအရသိရသည် Linaclotide ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း နှင့်သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုများမှာအောက်ဖော်ပြပါဘုံ Linaclotide ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်သည်။
ရှားပါးသော်လည်း၊ အောက်ပါ Linaclotide ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုသင်တွေ့ကြုံနိုင်သည်။
ပြင်းထန်သောသို့မဟုတ် persistent ဝမ်းလျှောခြင်း
၀ မ်းပျက်ဝမ်းလျှောခြင်းသို့မဟုတ်မူးဝြေခင်းသို့မဟုတ်ခံစားမှုနှင့်အတူလိုက်ပါလာသော ၀ မ်းလျှောခြင်း၊
အနက်ရောင်သွေးထွက်သံယိုသို့မဟုတ် tarry မစင်
မျက်နှာ၊ နှုတ်ခမ်း၊ လျှာနှင့်လည်ချောင်းရောင်ရမ်းခြင်း
အခြားရှားပါးသည့် Linaclotide ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိပါက၊ သင်သည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းပြီးနောက်ထပ်လမ်းညွှန်မှုအတွက်သင့်ဆရာဝန်ကိုချက်ချင်းဆက်သွယ်ပါ။
7. မည်သည့်ဆေးဝါးများသို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်မှုများ Linaclotide နှင့်ဆက်သွယ်မည်နည်း။
Linaclotide interaction က Linaclotide သည်အခြားဆေးများနှင့်အတူအလွန်အကျွံသုံးစွဲသူ၊ ဗီတာမင်ထုတ်ကုန်များ၊ ဆေးဖက်ဝင်အပင်များနှင့်သတ်မှတ်ထားသောဆေးဝါးများနှင့်အတူအသုံးပြုပါကဖြစ်နိုင်သည်။ Linaclotide အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်အစီရင်ခံတင်ပြသည့်ဆေးဝါးအချို့မှာ -
ဗီတာမင် C ကို
8. ခြားနားချက်ကဘာလဲs အကြား Linaclotide နှင့် lubiprostone?
နှစ်ခုလုံး Linaclotide နှင့် lubiprostone အရွယ်ရောက်သူများအတွက်နာတာရှည် idiopathic ဝမ်းချုပ်ခြင်းနှင့်စိတ်တိုလွယ်သောအူသိမ်ရောဂါလက္ခဏာများအတွက် DFA မှအတည်ပြုထားသောဆေးများဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အူသိမ်အူမလှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်လိုလျှင်၊
Lubiprostone သည် chloride channel activators ဟုလူသိများသောမူးယစ်ဆေးဝါးအတန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, Linaclotide (Linzess) သည် guanylate cyclase-C agonists ဟုရည်ညွှန်းသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။
အကြံပြုထားသော Linaclotide ဆေးကိုတစ်နေ့တစ်ကြိမ်သောက်သင့်သည်၊ အထူးသဖြင့်နံနက်စာမစားမီ၊ Lubiprostone ကိုတစ်နေ့နှစ်ကြိမ်သောက်လေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ဆေးဝါးများကိုနေ့စဉ်သောက်ရန်သတိရရန်အခက်အခဲရှိပါက Linaclotide သည်သင့်အတွက်ပိုမိုသင့်တော်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။
နှစ်ခုကိုဆေးပမာဏအရခွဲခြားရန်နောက်ထပ်အရာတစ်ခုမှာချက်ချင်းသောက်သင့်သောပမာဏဖြစ်သည်။ ဥပမာ CIC အတွက်အကြံပြုထားသည့် Linaclotide ၏တစ်ခုတည်းသောဆေးသည် 72 mcg ဖြစ်ပြီး Lubiprostone ၏ 8 mcg ဖြစ်သည်။
နောက်ထပ်ခြားနားချက် Linaclotide အမှုန့် (851199-59-2) နှင့် lubiprostone မူးယစ်ဆေးဝါးအပြန်အလှန်၏စည်းကမ်းချက်များ၌တည်ရှိ၏။ လွိုက်ကလိုရိုက်နှင့် Linaklotide တို့ထိတွေ့သည်ဟုသိရသည့်ဆေး ၅၈ ခုခန့်သည် Linaclotide ၏ထိတွေ့မှုသည်မူးယစ်ဆေးဝါးအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်သာသက်ဆိုင်သည့် lubiprostone နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်များစွာပိုများသည်။
lziprostone ၏ခွင့်ပြုချက်ကိုဇန်နဝါရီလ 30၊ 2012 တွင်ပြုလုပ်စဉ် Linzess ကို 31th သြဂုတ်လ 2006 တွင်အတည်ပြုခဲ့သည်။
သင်အစာအိမ်တွင်အစာစားသောအခါ Linaclotide ကိုသောက်သောအခါဝမ်းသွား၊ ဝမ်းဗိုက်နာကျင်မှုနှင့်ဓာတ်ငွေ့ကဲ့သို့သင်၏အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းလက္ခဏာများပိုမိုဆိုးရွားဖွယ်ရှိသည်၊ အကယ်၍ သင်သည်ပိုမိုပြင်းထန်သော ၀ မ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါဖြစ်ပွားပြီးအခြားပါးစပ်ဖြင့်ဆေးဝါးသောက်နေလျှင်၎င်းဆေးကိုစုပ်ယူခြင်းသည်ဆိုးရွားစွာ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်သည်။
အစားအစာအပြန်အလှန်အကျိုးရလဒ်အနေဖြင့်အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းသည်းမခံမှုကိုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန် Linaclotide သည်ဗိုက်အောင့်တွင်စားခြင်းဖြစ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, Lubiprostone-food interaction နှင့်သိပ္ပံနည်းကျသက်သေပြအဖြစ်အပျက်ရှိပါတယ်။ သို့သော်၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်သောအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများကိုမဖယ်ရှားပစ်ရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူထံမှဆေးသုံးစွဲရန်အကောင်းဆုံးအချိန်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုရှင်းလင်းစွာရှာဖွေရန်အရေးကြီးသည်
ယခုအချိန်အထိသက်ဆိုင်ရာသုတေသနနှင့် Linaclotide ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများအရ Lubiprostone သည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်ဆေးသောက်လျှင်သန္ဓေသားအားအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ Linzess သည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး မှယူမိလျှင်သန္ဓေသားကိုထိခိုက်စေနိုင်သည့်လေ့လာမှုတစ်ခုမျှမရှိပါ။
သိပ္ပံပညာရှင်များသည်ဤရိပ်မိသောလုံခြုံမှုကိုဆေးဝါးများ၏စနစ်နိမ့်သောစုပ်ယူမှုဟုမှတ်ယူကြသည်။ သို့သော်ယခုအချိန်တွင်မမွေးသေးသောကလေးငယ်၏မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်အန္တရာယ်ကိုသိရှိနိုင်ရန်သုတေသနများပိုမိုပြုလုပ်နေသောကြောင့်အန္တရာယ်ကိုအပြည့်အ ၀ ဖယ်ရှား။ မရပါ။
ထို့ကြောင့်၊ Lubiprostone သို့မဟုတ် Linaclotide ဆေးထိုးရန်ရည်ရွယ်သည်ဖြစ်စေကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်သည်ဆုံးဖြတ်ချက်၏သင့်လျော်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်သင့်သည်။
CIC အပြင် lubiprostone သည်ခ
အနည်းဆုံး 18 နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးများအတွက် Opioid- သွေးဆောင်ဝမ်းချုပ်ခြင်း (OIC) နှင့်အူသိမ်အူမရောဂါကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသည်။
Linaclotide နှင့်ထိတွေ့သောအခါ CIC မှအပမိန်းမများနှင့်ယောက်ျားများတွင်ဝမ်းချုပ်ခြင်း (IBS-C) နှင့်အတူလိုက်ပါသည့်အူသိမ်အူမရောဂါလက္ခဏာကိုလည်းကုသသည်။ ၎င်းကို OIC အတွက်ကုသမှုတစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးပြုခြင်းမရှိပါ။
ဘယ်အချိန်မှာအဲဒါကိုမှကြွလာ Linaclotide ကုန်ကျစရိတ်၎င်းသည် lubiprostone ထက်အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် Linaclotide ၏ကုန်ကျစရိတ်သည် 450 ဆေးတောင့်အတွက်ဒေါ်လာ 30 ဖြစ်ပြီး 60 ဆေးတောင့်၏ lubiprostone သည် $ 396 ဖြစ်သည်။ သို့သော်စျေးနှုန်းများသည်ရောင်းသူတစ် ဦး မှနောက်တစ်ခုနှင့်အချိန်အလိုက်ကွာခြားသည်။
laciprostone သည် Sucampo ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပြီး Linaclotide ထုတ်လုပ်သူကို Allergan ဟုလူသိများသောကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။
အထက်ပါကွဲပြားခြားနားမှုများရှိသော်လည်း lubiprostone နှင့် Linaclotide တို့ကိုစားသုံးသူများအားပါးစပ်ဆေးတောင့်ဖြင့်ရောင်းချခြင်းနှင့်၎င်းတို့တွင်ယေဘူယျများမရှိကြောင်းသတိပြုပါ။ ထို့အပြင်နှစ်မျိုးလုံးမူးယစ်ဆေးဝါးကိုမည်သည့်ရောင်းချသူထံမှမဆိုရရန်ဆရာဝန်၏ဆေးညွှန်းကိုလိုအပ်သည်။
9. ဘာ အခြားသတင်းအချက်အလက် အကွောငျး Linaclotide ငါသိသင့်သလား
အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများလိုပဲ Linaclotide အမှုန့် (851199-59-2) သို့မဟုတ်ဆေးတောင့်များကိုကလေးငယ်များလက်လှမ်းမမီနိုင်သောနေရာတွင်သိုလှောင်ထားသင့်သည်။ ထို့အပြင်ဆေးညွှန်းဆေးဖြစ်သောကြောင့်လူအချို့သည်ဆေးညွှန်းအတွက်ဆရာ ၀ န်သို့သွားရန်အခက်အခဲကိုရှောင်ရှားရန်အတွက်အခြားသူများအားမူးယစ်ဆေးဝါးဝေမျှရန်သွေးဆောင်ခံရနိုင်သည်။
သို့သော်ဆရာဝန်သည်ဆေးညွှန်းမရေးမီနှင့်အဆင့်ကိုကျော်ဖြတ်ခြင်းမပြုမီအကြောင်းရင်းများစွာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သောကြောင့် Linaclotide ဝေမျှခြင်းသည်အန္တရာယ်များနိုင်သည်။
သင် Linaclotide ကို ၀ ယ်လိုလျှင် US အပါအ ၀ င်နိုင်ငံအများစုတွင်ဆေးသောက်ရန်ဆရာဝန်၏ဆေးညွှန်းကိုသင်လိုအပ်ကြောင်းသင်သိရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်သင်အွန်လိုင်းဝယ်ယူရန်ရည်ရွယ်ထားခြင်းရှိမရှိ၊
သိုလှောင်မှုသို့ရောက်သောအခါ Linaclotide 851199-59-2 အတွက်အကြံပြုထားသောသိုလှောင်သည့်အပူချိန်မှာ ၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (၇၇ ° F) ဖြစ်သည်။ သင် Linaclotide အမှုန့်သို့မဟုတ်ဆေးတောင့်နှင့်ဆက်ဆံသည်ဖြစ်စေ၊ ဆေးကိုအစိုဓာတ်ကင်းသည့်နေရာတွင်သိမ်းဆည်းထားသင့်သည်။ ခွဲခြားခြင်းမပြုသင့်ပါ။ အဲဒီအစား, မူးယစ်ဆေးတစ်ခုလုံးကို၎င်း၏မူလကွန်တိန်နာထဲမှာထားပါ။
သင်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် Linaclotide 851199-59-2 ကိုဝယ်ချင်သည်ဖြစ်စေ၊ ရောင်းချရန်အတွက် Linaclotide သို့မဟုတ်အခြား Linaclotide ကိုအသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းကိုသင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောရင်းမြစ်မှရရှိရန်သေချာစေပါ။ အွန်လိုင်း Linaclotide ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်သင့်အားကောင်းမွန်သောရောင်းသူဆီသို့လမ်းပြနိုင်သည်။
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်လုံ့လဝီရိယမရှိဘဲ, အော့ဖ်လိုင်း / အွန်လိုင်းရောင်းချသူစစ်မှန်သောရှိသည်ဟုဟုဆိုသည် ရောင်းရန် Linaclotide မှောင်ခိုထုတ်ကုန်များရောင်းနေခြင်းသို့မဟုတ်သင့်ကြိုးစားရရှိသောငွေကိုခိုးယူခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
Andresen, V. , Camilleri, M. , Busciglio, IA, Grudell, အေ, Burton, D. , McKinzie, S. , ... & Currie, MG (2007) ။5ရက် linaclotide ၏သွားလာမှုနှင့်အူသိမ်အူမင်လည်ပတ်မှုအပေါ်ချုပ်နှောင်မှုနှင့်အူသိမ်အူမရောဂါလက္ခဏာများ။ Gastroenterology, 133(3), 761-768 ။
Chey, WD, Lembo, AJ, Lavins, BJ, Shiff, SJ, Kurtz, CB, Currie, MG, ... & Baird, MJ (2012) ။ ဝမ်းချုပ်ခြင်းဖြင့်အူသိမ်အူမရောဂါလက္ခဏာအတွက် Linaclotide: ၂၆ ပတ်ကြာကျပန်း၊ နှစ်ကြိမ်မျက်စိကွယ်ခြင်း၊ အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအမေရိကန်ဂျာနယ်, 107(11), 1702 ။
Cuppoletti, ဂျေ, Blikslager, AT, Chakrabarti, ဂျေ, Nighot, PK, & Malinowska, DH (2012) ။ ဆဲလ်ဖိအားနှင့်ထိတွေ့ပြီးနောက် epithelial ဆဲလ်အတားအဆီးဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ဆယ်လူလာ homeostasis ၏ပြန်လည်အပေါ် linaclotide နှင့် lubiprostone ၏ Contrast သက်ရောက်မှု။ BMC ဆေးဝါးဗေဒ, 12(1),3။
Harris က, အေ (2013) ။ LINACLOTIDE ။ အကြံပေး.
Johnston, JM, Kurtz, CB, Drossman, DA, Lembo, AJ, Jeglinski, BI, MacDougall, JE, ... & Currie, MG (2009) ။ နာတာရှည်ဝမ်းချုပ်နေသည့်လူနာများအတွက် linaclotide ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရှေ့ပြေးလေ့လာမှု။ အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအမေရိကန်ဂျာနယ်, 104(1), 125 ။
Lembo, AJ, Kurtz, CB, MacDougall, JE, Lavins, BJ, Currie, MG, Fitch, DA, ... & Johnston, JM (2010) ။ နာတာရှည်ဝမ်းချုပ်နေသည့်လူနာများအတွက် linaclotide ၏ထိရောက်မှု။ Gastroenterology, 138(3), 886-895 ။
Lembo, AJ, Schneier, HA, Shiff, SJ, Kurtz, CB, MacDougall, JE, Jia, XD, ... & Jeglinski, BI (2011) ။ နာတာရှည်ဝမ်းချုပ်ဘို့ linaclotide နှစ်ခုကျပန်းစမ်းသပ်မှုတွေ။ ဆေးပညာ၏နယူးအင်္ဂလန်ဂျာနယ်, 365(6), 527-536 ။